/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Pyridoxal phosphate
Rating: SKU: 54-47-7. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Pyridoxal phosphate ntụ ntụ, nke a na-akpọ PLP, pyridoxal-5′-phosphate ma ọ bụ P5P, bụ ụdị ọrụ vitamin B-6 na-arụ ọrụ ma ọ bụ coenzyme. P5P nwere ogige atọ dị n'okike - pyridoxal, pyridoxamine na pyridoxine. Ahụ gị chọrọ P5P maka ọrụ dịgasị iche iche gụnyere uto na nrụzi ahụ, ọrụ ntanetị na ume ume.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) vidiyo
Usoro Molecular: C8H10NO6P
Molekụla arọ: 247.14
Aha njirimara: PLP, pyridoxal-5′-phosphate ma ọ bụ P5P
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) ojiji
Kedu ihe usoro onyonyo nke Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Dabere na "ọgwụgwọ vitamin B6: Ọgwụ Na-agwọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ," P5P nwere ike inye aka belata mgbaàmà nke seborrheic dermatitis, ọrịa premenstrual syndrome, autism na ụdị ụfọdụ nke anaemia. Thedị P5P a tụrụ aro dịgasị iche dabere na ụkọ kpọmkwem ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ịchọrọ ịgwọ site na 2.5 mg na 50 mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ị ga-agwa onye ọrụ ahụike okwu tupu iwere mgbakwunye ahụike ọ bụla - gụnyere P5P.
Kedu Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5a-phosphate, P5P) si arụ ọrụ
Dabere na "Vitamin B6 Therapy: Nature's Vassile Healer," nke John Ellis dere, P5P nwere ikike belata anụ ahụ gị nke homocysteine N’ime ahụ gị, amino acid homocysteine ​​esiteghi na nri, mana sitere na amino acid ọzọ akpọrọ “methionine.” Homocysteine ​​bụ ihe nwere ike ibute ọrịa obi, na P5P nwere ike belata ogo methionine na ahụ gị, na-ebute obere mmepụta nke homocysteine. Ọzọkwa, P5P nwere ike inye aka kpuchido ahụ gị pụọ na ọrịa obi, ọbara mgbali elu na ọrịa vaskụla ọrịa.
Dabere na "Cecil Medicine: Expert Consult," P5P erughị eru nwere ike inye aka na ọrịa pancreatic na cervical cancer. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụmụ nwanyị nwere ọrịa cancer cervical na-enwe ụkọ vitamin B-6. Banyere cancer pancreatic, nnyocha e bipụtara na "Journal of the National Cancer Institute" kwubiri na pasent 26 nke ọrịa cancer pancreatic a mụrụ nwere ike ịbụ ihe a gbochiri egbochi na P5P supplementation tupu ọ banye ọrịa kansa pancreatic. Ndị nchọpụta ebipụtabeghị data ọhụụ gbasara nchọta ndị a.
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Marketingzụ ahịa
Esi zụta Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) si AASraw